Ka/Pae. Ranasingam (2020) | MM Movie Store
ဖွဈရပျမှနျပျေါမှာဇာတျအိမျတညျပွီးရိုကျကူးထားတဲ့အတှကျတဈခွားတမီးလျဇာတျကားတှလေိုစူပါဖိုကျခနျးတှမေပါဝငျဘဲ ဇာတျလမျးပွီးတဲ့အထိ ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိကွညျ့လို့ကောငျးတဲ့ဇာတျကားတဈကားပါ…
ဇာတျလမျးအကြဥျးကတော့ ရှာတဈရှာမှာအလုပျကရှားပါး ရကေလဲမရှိတော့ အဲ့ကရှာသားတှဟော နိုငျငံခွားကိုထှကျပွီး ပိုကျဆံရှာကွပါတယျ…
ဒါပမေယျ့အဲ့ရှာကရာနာ့ဆငျးလို့ချေါတဲ့လူတဈယောကျကတော့ ရှာမှာပဲနပွေီးရှာသူရှာသားတှရေဲ့အခကျအခဲတှကေို ကူညီဖွရှေငျးပေးနတေဲ့ ရှာ့အခဈြတျောလူတဈယောကျ.ရှာကမိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့အိမျထောငျကပြွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ဒီိလိုလူမှုရေးကိစ်စတှလေိုကျလုပျနလေို့မဖွဈတော့တာနဲ့နိုငျငံခွားထှကျပွီးအလုပျလုပျခဲ့တော့တယျ…
ဒါပမေယျ့တဈနမှေ့ာ သူတို့မြှျောလငျ့မထားတဲ့ ရာနာ့ဆငျးနဲ့ပတျသကျပွီးသတငျးဆိုးတဈခုရောကျလာခဲ့တယျ…..အဲ့ဒီနောကျမှာတော့…ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကွညျ့ပါ…IMDb…7.5 တောငျရထားတာမို့ India ကားကောငျးကွိုကျသူတို့ လကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျး….
ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်မှာဇာတ်အိမ်တည်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက်တစ်ခြားတမီးလ်ဇာတ်ကားတွေလိုစူပါဖိုက်ခန်းတွေမပါဝင်ဘဲ ဇာတ်လမ်းပြီးတဲ့အထိ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ…
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရွာတစ်ရွာမှာအလုပ်ကရှားပါး ရေကလဲမရှိတော့ အဲ့ကရွာသားတွေဟာ နိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြီး ပိုက်ဆံရှာကြပါတယ်…
ဒါပေမယ့်အဲ့ရွာကရာနာ့ဆင်းလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ ရွာမှာပဲနေပြီးရွာသူရွာသားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ ရွာ့အချစ်တော်လူတစ်ယောက်.ရွာကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒီိလိုလူမှုရေးကိစ္စတွေလိုက်လုပ်နေလို့မဖြစ်တော့တာနဲ့နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တော့တယ်…
ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာ သူတို့မျှော်လင့်မထားတဲ့ ရာနာ့ဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဆိုးတစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်…..အဲ့ဒီနောက်မှာတော့…ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ပါ…IMDb…7.5 တောင်ရထားတာမို့ India ကားကောင်းကြိုက်သူတို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း….
Liverpool Vs Manchester United (Live)
Stranger (Season 1) ၊ အပိုငျး (၈)